Game of Thrones ၏ နောက်ထပ် အပိုင်း ၅ ခုအား AI တစ်ခုမှ ဖွင့်ချလိုက်ပြီဖြစ်သည် – Curiosity
Home /Game of Thrones ၏ နောက်ထပ် အပိုင်း ၅ ခုအား AI တစ်ခုမှ ဖွင့်ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်
ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများရေးသားထားတဲ့ AI တစ်ခုဟာ Game of Thrones universe ရဲ့ နောက်ထပ် အပိုင်း ၅ ပိုင်းကို ကြိုတင်ရေးသားလိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီAI ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ထဲမှာဆိုရင် စာအုပ်အားလုံးရဲ့ information များသာမက fan theory များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ နောက်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံး ဖြစ်ရပ်များကို ရေးသားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာမူမှာ George R R Martin ရဲ့ A Song of Ice and Fire ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Game of Thrones ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ spoiler များပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲကို HBO မှာ လက်ရှိပြသနေပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် season 8 မှာ ဇာတ်သိမ်းမယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ Read at your own risk below!
Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ လက်ရှိထွက်သမျှ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအားလုံးထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့လို လူလတ်ပိုင်းတွေအားလုံးနီးပါး အသဲစွဲကြည့်ရှုကြပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံမှာ မျက်စိလည်လောက်ပေမယ့် အချိတ်အဆက်မိလွန်း ခိုင်လွန်းတဲ့အပြင် အထဲမှာပြောတဲ့ dialogues များ၊ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပရိယာရ်များဟာ မှတ်သားစရာအတုယူစရာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပေမယ့် သာမန်ရုံတင်ရုပ်ရှင်များထက်ကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုများ၊ CGI များကိုပါ ကြည့်ရှုရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူဟာ Season7ရဲ့ episode7အထိ ပြသပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဇာတ်ရှိန်ဟာလဲ အရမ်းတက်နေပြီး ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်နေကာ ပရိသတ်တွေအားလုံးလိုလိုဟာ ၂၀၁၉ မြန်မြန်ရောက်ချင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇတ်ခ်သောတ်(Zack Thoutt) အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သိပ်ပြီး မစောင့်စားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် သူဟာ စာရေးဆရာ George ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ စာအုပ် ငါအုပ် နဲ့ အခု ထွက်ရှိနေတဲ့ စာအုပ် ၅ အုပ်လုံးအပြင် Fan theory များဆီက knowledge တွေအားလုံးကို compile လုပ်ပြီးတော့ နောက်ထပ် chapter ၅ ခုထပ်ပြီးတော့ ရေးသားထားပါတယ်။
AI ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင် Jaime Lennister ဟာ သူ့ရဲ့ အစ်မဖြစ်သူ Cercei ကို သေချာပေါက်လုပ်ကြံမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jon Snow ဟာလဲ သူ့ရဲ့ dragon-whispering စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီး သူ့ချစ်သူ/အဒေါ်ဖြစ်တဲ့ Khaleesi ရဲ့ နဂါးများကို ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Varys the Spider ဟာ Mother of Dragons ကို အဆိပ်ခတ်ပြီးလုပ်ကြံလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ (တကယ် စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ)
AI ရေးတဲ့အထဲမှာဆိုရင် grammatically mistake တွေ အများကြီးပါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်ဟာ ရှင်းလင်းပြတ်သားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် စဉ်းစားစရာအချို့လဲ ပါပါတယ်။ Tyron ကို Jaime ကပြောကြားရာမှာ “I feared Master Sansa, Ser, She Baratheon is one of the crossing. The second sons of your onion concubine.” လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ ဒါဟာ Westeros history ရဲ့ biggest plot twist များဖြစ်နေမလား။ Ser Davos the Onion Knight ဟာ တိတ်တဆိတ်အရေးပါတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေမလား။ Sensa ဟာလဲ Baratheon တစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာပါ့မလား။ Walder Frey တို့ မိသားစုကများဖြစ်နေမလား။
ဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ AI များဟာ နေရာတကာမှာ အားလုံးထက် သာလာကြပြီးတော့ ဟိုတစ်လောကပဲ esports best players များကို ၂ နာရီပဲလေ့လာပြီး အနိုင်ယူသွားတာ ကြားမိကြမှာပါ။ ခရစ်စ်မတ်သီချင်းတွေရေးတယ်၊ ရုပ်ရှင် trailer များ ပြုလုပ်တယ်၊ အခြား CGI တွေကိုလဲ သူ့ဟာသူ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ သူတို့က လေ့လာတယ်၊ တွက်ချက်တယ်၊ ခန့်မှန်းတယ်၊ ပြုမူတယ်။ တကယ်တော့ အနုပညာပိုင်းမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ AI ဟာ ဝတ္ထုများအားလုံး၊ Fan Theory များအားလုံးကို လေ့လာပြီး သူတို့ရဲ့ နောက်ပြုမူနိုင်တဲ့ ခြေလှမ်းများကို ခန့်မှန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
George R.R. Martin ဟာ AI ရဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ပြီးတော့ နည်းနည်းတော့ တွေဝေသွားနိုင်နေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သူအစောကတည်းက စဉ်းစားထားပြီးသားတွေဖြစ်နေပြီး အခုလိုဖြစ်မှ သူတစ်ခြားဟာကို ရှောင်ရေးရတော့မလား။ ဒီလိုဆိုရင်လဲ သူစီထားတဲ့ plot ဟာ သူချထားသလောက် perfect မဖြစ်မှာကိုလဲ ပူရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရောက်သည်အထိ လည်ပင်းရှည်အောင် တမျှော်မျှော်နဲ့ စောင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
White Walkers များလိုပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ threat များဟာ ထင်မထားတဲ့ နေရာက ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
References: ScienceAlert, Motherboard
Trappist 1 နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ရေရှိနိုင်မည့် သက်သေအား ပထမဆုံးတွေ့ရှိပြီဖြစ်သည်
TAGS: Articles history Science News technology tharhtetaung